VPA လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း | FLEGT
ယနေ့အထိဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် (VPAs) များသည် သဘော တူညီချက်၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် မတူညီသော ချဉ်းကပ်မှုများကိုအသုံးချခဲ့ကြသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အားဖြင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ၄ မျိုးရှိပြီး တစ်ခုစီကို အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ။
စာချုပ်အပေါ် အဖွဲ့၀င်များ၏အကျိုး သက်ရောက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းများ
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်းသည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီးVPAs တိုင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရား ဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်ကဏ္ဍအားလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေသည်ကို စစ်ဆေး ရန်ဖြစ်သည်။ VPA တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆက်တွဲသည် စာရင်းစစ်သူများအတွက် သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ် နှင့် ပတ်သက်သည့် အခန်းတွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါ။
အချို့သော VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် VPA ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သစ်တော ဥပဒေအကျိုး သက်ရောက်ရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖန်တီး သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများသည် များသောအားဖြင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများဖြစ်ကြပါသည်။ လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူများ၏အလုပ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
သစ်တောဥပဒေနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မလိုက်နာခြင်းကို အစီရင်ခံခြင်း
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကတိကဝတ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုးတက်မှုနှင့် ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း
ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လေးစားလိုက်နာမှုမရှိခြင်းကိုတုံ့ပြန်ချက်များ ဆိုင်ရာခြေရာခံခြင်း နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
VPA အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်၏ လုပ်ငန်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း
စာရင်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မအောင်မြင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားခြင်း
စနစ်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး နှင့် တရားဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရေး၊ ဥပဒေနှင့် စည်းကမ်း မူဘောင်များခိုင်မာရေးအတွက် နည်းလမ်းများ အကြံပြုခြင်း
သစ်တောကဏ္ဍကို ယေဘူယျအားဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ မတူညီသည့် VPAs များသည် လွတ်လပ်သည့် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို မတူကွဲပြားစွာဘောင်ခတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားကြသည်။ သို့ရာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အားဖြင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း ၂ မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့သည်လိုက်ဖက်ပြီး ရှေ့သွား နောက်လိုက်ညီညီအလုပ်လုပ် နိုင်ပါသည်။
သစ်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်တွင် တရားဝင်ထည့်သွင်းထားသော လေ့လာစောင့် ကြည့်ခြင်း။ အင်ဒိုနီရှားကဲ့သို့ နိုင်ငံအချို့တွင် လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာ သူသည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ တွဲပါနေသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ် သည့်စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများသည် အစိုးရ နှင့် သဘောတူညီမှုဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီး VPA တွင် သူတို့ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ တရားဝင်အခန်းကဏ္ဍသည်သတင်း အချက်အလက် များနှင့်သစ်တောများကို ရယူကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအပြင် တရားဥပဒေအကျိုးသက် ရောက်ရေး အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပါလွယ်ကူချောမောစေ ပါသည်။
VPA အတွက် ပံ့ပိုးပေးနေသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခံရသော်လည်း တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့် စနစ်ပြင်ပမှ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း။ မတူသည့်အချက်မှာ အခြားနိုင်ငံများ တွင်မူလွတ်လပ်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်သူသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အကြောင်းအရာများနှင့် တရားဝင်သစ် ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်ကိုပြင်ပမှ စစ်ဆေးပေး သည်။ ဤလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းမျိုးကို အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များမှ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင် လေ့ရှိပြီး တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍တရားဝင် လုပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် တရားဝင်စနစ်ပြင်ပမှ နေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကို စိတ်ချရစေရန်နှင့် သတ်မှတ်ထား သောတာဝန် သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြင့်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားခံရခြင်း မှ ရှောင်လွှဲရန်ဖြစ်သည်။ တရားမဝင်လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် သတင်းအချက်အလက်များရယူနိုင်သော လေ့လာ စောင့်ကြည့် သူများအပေါ်တွင် မှီခိုနေပြီး အစိုးရများအား VPA မှ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် အုပ်ချုပ် ရေးစနစ် ရှုထောင့် နှစ်ခုစလုံးကို တာဝန်ခံ စေရန်ဖြစ်သည်။
VPA နိုင်ငံအများစုတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် လွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း နှင့် VPA တွင် ၎င်း၏တရားဝင်အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ရှိသင့်၊ မရှိသင့်ကို ကာလကြာရှည် ဝေဖန်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
ကင်မရွန်း။ VPA မှ လွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို ယခုအတိုင်းအသိအမှတ်မပြုသော်လည်း အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်အတွက် သတင်း ရင်းမြစ်အဖြစ် အလေးထားပါသည်။ VPA တွင် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအား တရား ဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံ သည့်စနစ်၏ အလားအလာရှိသော လက်နက်ကိရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်သော် လည်း မရှိမဖြစ်ပါဝင်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်မထားပါ။
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဥပဒေပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သင့်သည်ဟု VPA ကသတိပြုမိပါသည်။ ၎င်းသည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအလားအလာကို လက်ရှိ တွင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဟုဂရုပြုမိပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် ဒေသခံ NGO ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲပြီး အစိုးရနှင့် အမြဲတမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်အဖြစ် သဘောတူမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။
ဂါနာ။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက သူတို့သည်စနစ်အတွင်းမှာထက် စနစ်ပြင်ပတွင် ပိုမိုအား ကောင်းသော အကြံပြုထောက်ခံသူများဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အစိုးရ၏ လက်အောက်တွင် တရားဝင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် မလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် VPA တွင် လွတ်လပ် သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အကြောင်း မဖော်ပြထားပါ။
အင်ဒိုနီးရှား။ VPA တွင် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူကို လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း ခေါ်ဆိုပြီး အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင် သည်။ VPA သည် လွတ်လပ်သည့်စောင့််ကြည့်လေ့လာသူများအား တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်တွင် သီးခြားခွဲထုတ်၍ မရသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ထားသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်အတွက် အချက်အလက်ရယူပေး သည့်အရင်းအမြစ်အဖြစ် မှတ်ယူထားသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ၏တာဝန်ကို အဓိကအားဖြင့် အဖွဲ့ အစည်းပေါင်း ၆ဝ ကျော်နှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၃ဝဝ ကျော်ပါဝင်သည့် JPIK လွတ်လပ်သောကွန်ယက်မှ ဆောင်ရွက်သည်။ JPIK အဖွဲ့ဝင်များသည် မည်သည့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကိုမဆို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် တရားဝင်ဖြစ်မှု အသိအမှတ်ပြုလွှာကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီများ၊ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီများ၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အာဏာပိုင်များနှင့်ပတ်သက်သည့် မကျေနပ်မှုများကို အမှုဖွင့်နိုင်သည်။ JPIK သည် လာဘ်စားမှုကဲ့သို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်ကိစ္စများကိုလည်း တိုင်ကြားနိုင်သည်။ ကွန်ယက်အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ဝင်ရောက်သိရှိနိုင်ခွင့် အတွက် အတည်ပြုချက်ရယူရန် အစိုးရထံမှ တရားဝင်အထောက် အထားစာရွက် စာတမ်းကို တောင်းခံနေပါသည်။
လိုင်ဘေးရီးယား။ VPA မှ လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် နှင့် လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်အတွက် အချက်အလက်ပေးနိုင်မည့်ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုထားသည်။
ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ။ VPA တွင် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သစ်အချောထည် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏ အလုပ်များကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ရာတွင် နှင့် လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်သို့ သတင်းအချက်အလက် ထောက်ပံ့ရာတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အခန်းကဏ္ဍကို အကြမ်းဖျဉ်းဖော်ပြထားသည်။ ဒေသခံ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု VPA ကမှတ်သားထားပါသည်။
အချို့သောနိုင်ငံများတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် သစ်တောအားလွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကို VPA လုပ်ငန်းစဉ် မစတင်မီကပင်လုပ်ဆောင် နေကြပြီဖြစ် သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင်မူ ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍသည် အသစ်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးသူသည် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်း ပုဂ္ဂလိကအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများကလည်း လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးသူများ အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ NGO လေ့လာသူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ သည်အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင် သည်။
လွတ်လပ်သောသစ်တောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် EU သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) လုပ်ငန်းစီမံချက် နှင့် VPA တို့ထက် စောလျင်စွာ လုပ်ဆောင်သည်။ လွတ်လပ်သောသစ်တောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် VPA လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှင့် ကွာခြားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လွတ်လပ်သောသစ်တောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် သစ်တော ကဏ္ဍတွင် ဥပဒေလေးစားလိုက်နာမှုကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ VPAs များသည် လွတ်လပ် သောသစ်တော စာင့်ကြည့် စစ်ဆေးသူများကိုယေဘူယျအားဖြင့် အသိအမှတ်မပြုသော်လည်း စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးသူများ သည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ လွတ်လပ်သောသစ်တောစာင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူများရှိပြီး VPA ဆွေးနွေးခြင်းအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ပြီးမြောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများမှာ ကင်မရွန်း၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတကွန်ဂိုနှင့် သမ္မတကွန်ဂိုနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြသည်။ လွတ်လပ်သောသစ်တောစာင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူများသည်အများအားဖြင့် အမျိုးသား အဆင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
VPAs များအားလုံးတွင် EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် သဘောတူညီချက်၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ပူးတွဲ ကတိပြုထားပါသည်။ VPAs များအားလုံးတွင် EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် သဘောတူညီချက်၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ပူးတွဲ ကတိပြုထားပါသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် VPA မှ ရည်မှန်းထားသော ရလဒ်ရမရကို စစ်ဆေးသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် အကဲဖြတ်ခြင်းများက မူဝါဒများ၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုကိုညွန်ပြနေသည့်အခါ အစိုးရမူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်းကိုသတင်းပေးသည်။ အဖွဲ့ဝင်များက လူမှုရေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် VPA စာပိုဒ်ခွဲနှင့်အညီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရန်နှင့် လျော့ပါးစေရန် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် မရည်ရွယ်သော ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဖော်ထုတ် ပေးနိုင်ပါသည်။
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ကတိပြုချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် VPA ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး မူဘောင်တစ်ခုကို အခြေခိုင်စေပါသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့် နယ်ပယ်များတွင် ဌာန ဆိုင်ရာ၏ ထိရောက်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုနှင့် ဈေးကွက်ဆက်စပ်မှုများ နှင့် တွန်းအားများ၊ တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်း၊ သစ်တောအခြေအနေ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ပါဝင်ပါသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်စနစ်တစ်ခုကို ထူထောင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်သည် စမှတ်များကိုပြဌာန်းရန် နှင့် ရွေးချယ်စရာများကို ရှာဖွေရန် ထပ်ဆောင်းလေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်နှင့်အကြံညဏ်ရယူမှုများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ကာလတစ်ခုအကြာ သူတို့၏ဦးစားပေးမှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေသည်ကို သေချာစေရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများကို ပူးပေါင်းပါဝင်စေသင့်သည်။
ကင်မရွန်း VPA။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသည် အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သော လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး VPA ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုများကို အစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို ထွက်ပေါ်စေရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသည် အဆိုပါ နည်းလမ်းအားအတည်ပြု ထောက်ခံပေး ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဂါနာ VPA။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသည် EU နှင့် ဂါနာနိုင်ငံသားများ၏ ဉီးစားပေးမှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် ရေတို နှင့် ရေရှည်ရလဒ်များနှင့် အကျိုးသက် ရောက်မှုရလဒ်များပါဝင်သောအစုံအဖြစ်သို့ပေါင်းစပ်ပေးရန် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ အလုပ် လုပ်နေခဲ့သည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဆပ်ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှား VPA။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသည် VPA အကျိုးသက်ရောက်မှု စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာရန်နှင့် စမ်းသပ်ရန် အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများပါဝင်သည့် နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသည် အဆိုပါ နည်းလမ်းအားအတည်ပြု ထောက်ခံပေး ရန်တာဝန်ရှိသည်။
လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ EU နှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဈေးကွက်များက FLEGT လိုင်စင်ရသစ်များကို မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အခြား လုပ်ငန်းများအပြင် လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူသည် FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း အားဖြင့် ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှု၊ ဈေးကွက်တိုးတက်မှုနှင့် သစ်ဈေးနှုန်းများအပေါ် မည်ကဲ့သို့သက်ရောက် နေသည်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောဈေးကွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူသည် VPAမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် EU အား FLEGT လိုင်စင်ရရှိထားသည့် သစ်၏ စျေးကွက်အတွင်း စွမ်းဆောင်မှုကို ဖော်ပြသည့်ယုံကြည်ရသော စာရင်းဇယား အချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။
ဥရောပကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်သောစျေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် International Tropicla Timber Organization မှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်၍ (၅) နှစ်ကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ စာချုပ်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များမှာ။
EU ဈေးကွက်တွင် FLEGT လိုင်စင်ရသစ်များကို လက်ခံခြင်းနှင့် အလားအလာ တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်၊ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်၊ အစီရင်ခံရန်နှင့် ဖြန့်ဝေရန်
သစ်ဈေးနှုန်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အလားအလာများ အထူးသဖြင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ များနှင့်ပတ်သက်၍မည်မျှ သက်ရောက်သည်ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန်VPA ၏ သက်ရောက်မှုများ နှင့်ဆိုင်သော သုတနှင့် နားလည်မှုတို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်
VPA နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပကော်မရှင်အနေဖြင့် FLEGT လိုင်စင်ရရှိထားသည့်သစ်များ ကုန်သွယ်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက် အလက်များ ထောက်ပံ့ပေး ရေး သေချာစေရန်
VPA ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီများ၏ တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သတင်းပေးရန်
ဈေးကွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် လွတ်လပ်သော၊ အချိန်မှီသောနှင့် တိကျ သောသတင်းအချက်အလက်များကို ပေးရန်
FLEGT လုပ်ငန်းစီမံချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ကိုဖြည့် ဆည်းပေး ရန် နှင့် ၎င်းအကောင်အထည်ဖော်နေမှုကို သတင်းပေးရန်
EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး လွတ်လပ်သောဈေးကွက်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးသည့်အခန်းကဏ္ဍကို ထာဝစဉ်တည်တံ့စေရန်အတွက် ရေရှည်မဟာဗျူဟာများ ပေါ်ထွက် စေရန်
လွတ်လပ်သော စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
VPA မှ တာဝန်ခံမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးမည်နည်း။
Brack, D. and Leger, C. 2013 Exploring Credibility Gaps in Voluntary Partnership Agreements. A Review of Independent Monitoring Initiatives and Lessons to Learn. Independently published. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
International Tropical Timber Organization's FLEGT လွတ်လပ်သောဈေးကွက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ http://www.itto.int/imm/
Meridian, A. et al. 2014. SVLK in the Eyes of the Monitor. Independent Monitoring andaReview of the Implementation of the Timber Legality Verification System 2011–2013. JPIK (Indonesia Independent Forestry Monitoring Network). [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]